Raha toa moa ka ... taonan'ny bitro : comments » What if ...
Raha toa moa ka … taonan’ny bitro
Friday, January 14, 2011 | 6 comments comments
Rehefa taom-baovao toy izao dia mahazatra ny mandre ny mpaminany izatsy na ny mpahita ny miafina izaroa manambara ny hitranga amin’ity taona ity. Somary reraka aty ambanivohitr’Antananarivo aty moa izahay ka tsy toy ny tamin’ny taona lasa fa toa tsy manam-potoana firy intsony hanalana azy mamaky an-dry Mme Shabberah na ry Pasitera Mailhol. Asa izay nolazain-dry zareo fa internet no azo ialana vonkina eto dia naleo izany nikaroka tamin’ny internet izay ho fahitan’ny sasany ity taona ho avy ity.
Cette photographie par DotMG est mise à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Partage des Conditions Initiales à l’Identique 3.0 Unported.
Basé(e) sur une oeuvre à dotmg.net.
Dia ny tononandro sinoa aloha no mba novakivakiana, fa mialoha an’izay dia tsara angamba aloha ny manamarika hoe ity taona 2011 ity hono dia ho taonan’ny fifidianana hoy ny Filoha Andry Nirina Rajoelina, satria notombanany hifanesisesy ny fifidianana eto Madagasikara amin’ity taona ity. Raha sendra tafaresaka tamina mpitandrina Malagasy iray izay indray aho dia nilaza izy fa hoe ho taonan’ny fitiavana hono ity taona 2011. Tsara izany ho’aho, saingy toa lasa “teny maloto” izany fitiavana izany ho an’ny mpanohitra, noho io voambolana io toa efa lasan’ny Filoha ambongadiny amin’izay ataony rehetra. Fa raha hiverina amin’ny tononandro sinoa teo isika dia ho an-dry zareo kosa indray dia ho taonan’ny bitro ity taona 2011.
Ny taonan’ny bitro hono dia taona mampety tsara ny dinika ambony latabatra sy ny fifanarahana, ary hiezaka hifanara-tsaina hono ny mpitondra eto an-tany mba hisian’ny filaminana any amin’ireo tany niharan’ny krizy politika.
Fa ny bitro hono dia biby tsy tia fifandirana ary hanao ny fomba rehetra hialana amin’ny fifandonana.
Ny olona teraka amin’ny taonan’ny bitro hono dia olona manan-talenta sy be ambitions. Malaza ary manana fanahin’artista.
Ho tanteraka tokoa anie izany!
Hamaranako azy dia mirary soa ny Filoha aho amin’izay kinasany hanasoavana ny firenena. Mirary ny vahoaka Malagasy tsivakivolo ihany koa hiroborobo amin’ny ara-pitiavana sy ara-karena amin’ity taona 2011 ity.
Dia farany mba hanipy teny kely ho an’ny Filoha raha te haharitra tsy hangozohozo eo amin’ny fitondrana izy. Izy ity indray dia faminanian’i DotMG manokana, ary mampahatsiahy fotsiny aho fa ny Filoha Marc Ravalomanana tamin’ny fotoan’androny efa notoroako hevitra tsy hanao an’iny lalana mandrara ny film matroka amin’ny fiarakodia iny nefa tsy laitra nakisoka ka dia iny no niafarany. Koa ny hafatra dia anankiroa : voalohany foano io eritreritra hanao PIU io fa fika hafa atao hampidiram-bola ho an’ny kitapom-bolam-panjakana. Faharoa, dia mba dokadokafy ilay PDS-n’Antananarivo Renivohitra amin’ny asa ataony ary ataovy izay tsy hisian’ny disadisa eo amin’ny mpitondra ny firenena sy ny mpitantana ny renivohitra.
Sunday, January 16, 2011 - 22:48:16
Sunday, January 16, 2011 - 22:48:39
indrindra ilay hoe aza miady @ ingah mera :-)
Sunday, January 16, 2011 - 22:49:34
ampiana hoe vitao raim ny fifidianana dia atsaharo ary alaviro ny mesure tandra-metraka rehetra
Monday, January 17, 2011 - 15:42:19
Tuesday, January 18, 2011 - 00:56:39
Tuesday, January 18, 2011 - 00:57:29
Raha toa moa ... katsaka, tsaramaso, voanjobory. »
« Raha toa moa ka ... azo dia namana.